Paris Saint-Germain Oo Xasuuqday Kooxda Clermont, Neymar Iyo Mbappe Oo Saddaxley Dhaliyay
HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo Xasuuqday kooxda Clermont, Neymar iyo Mbappe oo Saddaxley dhaliyay
April 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka France 0
Kylian Mbappe iyo Neymar ayaa dhaliyay seddexleey iyadoo Paris Saint-Germain ay si lama filaan ah u soo gabagabeysay qaab ciyaareedkii liitay ee ay martida ku ahaayeen ka dib markii ay 6-1 ku garaaceen Clermont kulan ka tirsan horyaalka Ligue 1.
Paris Saint-Germain oo 15 dhibcood oo nadiif ah ku haysa hoggaanka horyaalka iyadoo toddoba ciyaarood oo kali ahi ka hadhsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedka ayaa u baahan kaliya inay laba ciyaarood oo kale badiso, si loogu caleemo-saaro horyaalka.
Neymar ayay u ahayd habeen uu goolku jecel yahay oo taabashada uu sameeyaba ay shabaqa gelayso, waxaanu dhaliyey saddex gool oo daran doori ah oo midkood rikoodhe ahaa, halka saddexda kalena uu raaciyey Kylian Mbappe oo isaguna saddexlay xaqiijistay.
Lionel Messi ayaa sidoo kale muujiyey bandhig fiican oo sameeyey saddexley caawin ah, waxaana uu qaatay doorkiisa kubbad samaynta iyo muhanninimada, isaga oo halkii uu gool ka raacin lahaa ka doorbiday inuu caawiyo saaxiibbadiisa Neymar iyo Mbappe.
Daqiiqaddii lixaad ee bilowga ciyaarta ayuu Neymar furay gool-dhalinta, kaddib markii uu shabaqa ku hubsaday kubbad uu ka helay Lionel Messi, waxaana u jawaabay Kylian Mbappe oo isaguna gool u beddelay kubbad uu uga soo shaqeeyey Lionel Messi oo ahaa farsamo-yaqaanka ciyaartoyda goolka hortiisa kubadda u dhigaya.
Ka hor intii aan waqtiga nasashada loo bixin ayay kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayay ee Clermont Foot ay keentay hal gool oo aan waxba u tarin, isla markaana kusii diray PSG, waxaana daqiiqaddii 42aad u dhaliyey laacibka lagu magacaabo Jodel Dossou.
Qaybtii labaad ayay PSG ku galgalay Clermont, waxaanay ka dhalisay afar gool oo kale oo ay min laba u qaybsadeen Neymar iyo Kylian Mbappe.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa daqiiqaddii 71aad rikoodhe u saxeexay PSG, ciyaartana ka dhigay 3-1, waxaase sagaal daqiiqadood gudahood laba gool oo kale ku dhaliyey Kylian Mbappe ka hor intii aanu Neymar goolka lixaad keenin xilli ay dhamaadka ciyaarta ka hadhsan tahay toddoba daqiiqadood.
PSG ayaa waxay leedahay 71 dhibcood, waxaana kusoo xiga labada kooxood ee Rennes iyo Olympique Marseille oo min 56 dhibcood haysta.